Booliiska Maraykanka oo u diyaargaroobay rabshado ka dhalan kara go’aanka Trump | Baydhabo Online
Booliiska rabshadaha ka hor taga ee magaalada Pittsburg ee dalka Maraykanka ayaa isu diyaarinaya sidii ay uga hortagi lahaayeen rabshado laga baqdin qabo in ay ka dhashaan go’aan la sheegay in uu damacsanyahay Trump, kaas oo ah in uu xilka ka xayuubiyo baaraha gaarka ah ee dacwadaha la xiriira fadeexada farogalinta Ruushka ee doorashadii Maraykanka 2016-kii.
Booliiska waxa ay sheegeen in diyaar garoowga uu yahay oo kaliya mid taxadar ah, balse aysan ka dhignayn in ay ka warhayaan go’aanka kama dambeysta ah ee Trump.
Dad badan ayaa olole ka wada baraha bulshada, iyaga oo ku baaqaya isu soo baxyo balaaran haddii uu Trump ku dhaqaaqo go’aanka uu ku eryayo Robert Mueller.
Tan waxa ay ka dambaysay kadib markii ay warar kusoo baxeen warbaahinta oo sheegaya in Trump uu doonayo in uu shaqada ka eryo Mueller iyo ninka madaxda u ah , xeel illaaliye ku xigeenka Rod Rosenstein.
Mar wax laga weeydiiyay in uu eryayo ayuu ku gaabsaday “wali waa ay joogaan”, hadalkaas oo aanan xaalada iyo hadal heynta dhimin.
Todobaadkii hore baarayaasha waxa ay u dhaceen guri uu leeyahay garyaqaanka Trump.
Guddoomiyaha guddiga garsoorka ee Aqalka Sare ee Maraykanka oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in ay diyaarinayaan xeer lagu difaacayo Meuller in uu madaxweynaha shaqada ka eryi karo.